ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ မရရှိသေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား (ရုပ်သံ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ မရရှိသေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား (ရုပ်သံ)
ဘာဘဲပြောပြော အတော်အသင်.တော.ရလာတယ်ပြောရမှာပါ ။
စိုးရိမ်ရတာက အာဏာပိုင်တွေ ခုသွားနေတဲ.ပုံက
ပြောချင်ရာပြော ၊ ရေးချင်ရာရေး ၊ ဆဲချင်ရာဆဲ ၊
ငါတို. ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ဆိုတဲ.လမ်းကို
ရှေ.ကို ကောင်းဖို.လမ်း မမြင်မိဘူး ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေ ကဘဲ မတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ.
စစ်အာဏာရှင် အစိုးရကိုအနိုင်ရမယ် ....... ........